सपनामा यौन सम्पर्क गरेको किन देखिन्छ ? यस्तो छ कारण - Naya Pusta
सपनामा यौन सम्पर्क गरेको किन देखिन्छ ? यस्तो छ कारण
एजेन्सी । निदाइरहेको बेलामा एकपछि अर्को विचार, भावना र संवेदना अचेतन रूपमै मस्तिष्कमा आउनु सपना देख्नु हो ।
मानव इतिहासमा धेरै प्रयास भए पनि व्यक्तिले किन कुनै किसिमको सपना देख्छ र त्यसको अर्थ के हुन्छ, राम्ररी बुझ्न सकिएको छैन । सपना विभिन्न किसिमका (डरलाग्दो, साहसिक, रमाइलो तथा यौनसम्बन्धी) हुन्छन् । सामान्यतया प्रजनन प्रणालीले राम्ररी कार्य गर्न थालेपछि सेक्स हर्मोनले एकातिर यौनव्यग्रता तथा यौनतनाव बढाउँछ भने अर्कोतिर यस अवस्थामा वीर्यको पनि उत्पादन हुन थाल्छ ।
अनि वीर्यले स्वाभाविकरूपमा बाहिर निस्कने बाटो खोज्छ । यौनचाहना प्रबल हुन थालेपछि एक किसिमको यौनतनाव बढ्न थाल्छ । यसलाई शान्त पार्नु पनि स्वाभाविक कुरा नै हो । हस्तमैथुन वा यौनसम्पर्कबाट यस्तो अवसर मिल्न नसकेको स्थितिमा व्यक्तिले यौन–सपना देख्छ । अनि पुरुषको हकमा सपनामै वीर्यस्खलन हुने र यौन चरमसुख प्राप्तिको स्थितिसम्म पुग्ने हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकको आँखा छलेर कालो धन लुकाउने केन्द्र बन्दै सहकारी, काभ्रेको एउटा सहकारीमा ५२ करोड बचत
सेक्सअघि भूलेर पनि नखानुहोस यी १५ खाद्यपदार्थ